Kenya oo xayiraad ku soo rogtay 13-xawaaladood iyo akoonada bangiyada 86 ruux | Sagal Radio Services
Kenya oo xayiraad ku soo rogtay 13-xawaaladood iyo akoonada bangiyada 86 ruux
Dowladda Kenya ayaa xayiraad ku soo rogtay 13 xawaaladood iyo akoonada 86 ruux oo looga shakisan yahay inay maalgeliyaan Al-Shabaab, iyadoo tallaabadan ay tahay mid looga jawaabayo weerarkii u dambeeyay Al-Shabaab ku qaadeen Jaamacadda Gaarisa.
Guddi Wasiiro ah oo ka tirsan dowladda Kenya, isla markaana qaabilsan arrimaha la dagaalanka Argagixisada ayaa shir ay shalay ku yeesheen magaalada Nairobi waxay amar ku bixiyeen in la xayiro akoonada bangiyada xawaalado iyo shaqsiyaad magac ku leh Kenya oo ay ku jiraan Culumo caan ah.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Kenya Joseph Nkaissery ayaa sheegay in xayiraada la saaray shaqsiyaadka iyo xawaaladaha, inkastoo aanu shaacin magacyadooda, hase ahaatee waxaa uu tilmaamay in dadkaas ay taageero u fidiyaan Al-Shabaab.
Wararka qaar ayaa sheegaya in liiska dadka ay ku jiraan culumo magac ku dhex leh Soomaaliya iyo xawaalado caan ah, waxayna arrintan saameyn ku yeelaneysaa dadka Soomaaliyeed ee Kenya ku nool, kuwaasoo lacago dibada looga soo diro.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa war qoraal ah oo ay si wada jir ah u soo saareen waxay ka digeen in la xiro xawaaladaha Soomaalida, iyagoo ka hadlay muhiimada ay u leeyihiin xawaaladaha shacabka Soomaaliyeed.
Madaxda ayaa sheegay in hadii la xiro xawaaladaha ay dhibaato ku noqoneyso nabada iyo dib u dhiska Soomaaliya.
Tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii jaamacadda Gaarisa, dawladda Kenya ayaa ku dadaaleysay in ay ka hortagto Al-Shabaab, iyada oo bandow kusoo rogtay gobolka waqooyi bari, duqeyna u geysatay saldhigyo ay sheegtay inay Al-Shabaab ku leeyihiin Gobolka Gedo.